Semi-otomatiki richigadzirisa Line ndiyo yakakodzera michina iri vakawanda kugadzirwa kuti Foundry fekitari. Zvakanakira iko kushoma kwekudyara, kudzoka nekukurumidza, kudzikisira basa, kusimudza mhando, kukanda mashandiro uye kugadzirisa.
Semi-otomatiki richigadzirisa Line ndiyo yakakodzera michina iri vakawanda kugadzirwa kuti Foundry fekitari. Zvakanakira iko kushoma kwekudyara, kudzoka nekukurumidza, kudzikisira basa, kusimudzira mhando, nyore kushanda uye kugadzirisa.
Mhando yeiyo yekuumba mutsara inogamuchira iyo joet-svina yekuumba muchina, iyo mold inotakura yekuchinjisa kukanda chakuvhuvhu enda pakudurura nechitonhorera. Mushandi kutakura chinu uye jecha muforoma kuburikidza mhepo hang, uyewo chinoumba zvekupfakira, machisi chinu, uye kudira nezvimwewo, muitiro vave Semi-otomatiki oparesheni, chinotenderera muchina kudzoka chinu.
Semi-otomatiki richigadzirisa Line (maererano chinu kukura).
Muchina uyu, iyo michina yakakwenenzverwa kuumba mutsara, inoita nzira dzakasiyana senge kuumba, musimboti wekuzadza, kukanda, chinu chakazungunuka chibatanidzwe pamwechete kuti dzigadzire tambo yepedyo yekuumba. Ndiyo yakakodzera michina yekuziva iyo yekuumba michina uye otomatiki. Kazhinji, inoramba ichienderera mberi, asi inogona kuve danda rekufamba dhizaini zvakare sekudikanwa. Hurefu hwese uye marongero anoenderana nekuumbwa kwesheni uye mamiriro emusangano.
Flask, Kuumbwa chinu, Horizontal Flaskless richigadzirisa Line, Semi-Automatic richigadzirisa Line, Flaskless richigadzirisa Machine, Kuumbwa bhokisi,